အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ငါ မင်းကို မိုးတိမ်တွေပေါ်မှာ ချစ်မယ် (အခန်း-က-၁၁)
လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဝက်ဝံ။ ကြည့်ရတာ ခုနက ခုန်တန်းပေါ်မှာ မှောက်ရက်အိပ်နေရာကနေ ခုမှ နိုးလာသလိုပုံ နဲ့ ကျမ လက်ထဲက အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ကိုကြည့်ပြီးတော့....
အေးစက်စက် လေသံနဲ့ .....
ပေါ်မှာ သူ့ပုံ ကပ်ထားတယ်.....နေအုံး......အဲ့တာ ဝက်ဝံ ပုံမဟုတ်ဘူး။ ဝက်ဝံက သူ့ပုံက မျက်နှာကို ညှပ်ပြီး တခြား လူတယောက်ရဲ့ ဓါတ်ပုံပေါ်မှာကပ်ပြီး သူ့ပုံလုပ်ထားတာပဲ။ ဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်ထားတဲ့လက်ရာက ညံ့လိုက်တာ။ သူ့ ဆံပင်တွေကတောင် ထောင်နေသေးတယ်။
ပေါ်ကနေ ခွာချလိုက်တယ်။ ဘုရားရေ.... အောက်ကပုံက ကျမပုံဖြစ်နေတာကိုး။ လက်စသတ်တော့ ဝက်ဝံ ကျမ ပုံ ကို တနေ့က ယူသွားတာ ဒီလိုသုံးဖို့ပါလား။ ဟိုတနေ့က လူပုလေးက ကျောင်းသားတွေကို ဂျာနယ်တွေထပ်ခိုင်း
“အဲ့တာနဲ့ပဲ တွေပကရာပုံတပုံရှာပြီး ကျန့် ဂျင်းနီ ပုံမှာ ကပ်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့။ နှစ်ယောက်စလုံးကလဲ အပေါ် ပိုင်းတူနေတာကိုး။ ဒါကဘာလဲ......လူ့အရေခွံ မျက်နှဖုံးလား စက္ကူကပ်ထားတဲ့ မျက်နှာလား? နင်တို့နှစ်ယောက်
တော်တော်လှောင်တတ်ပြောင်တတ်နေတယ်ပေါ့ ဟုတ်လား?” လူပုလေးက ရယ်သလိုလိုလုပ်ပြောနေပေမယ့် မျက်နှာပေါ်က အပြုံးက ပြောနေတာကတော့......“ငါတကယ်ရယ်ရတယ်လို့ပြောနေတယ်ထင်နေလား ငါရွဲ့ပြော
Posted by တီချမ်း at 6:06 AM
အော် . ပေါ်လာသေးသကိုး...
ဒီပို့စ်ကို ဘယ်သူမှ မဘတ်တာတော့ သေချာတယ် တီ။
တီချမ်း April 17, 2012 at 8:54 PM
အင်း လူ ၆၀ လောက်တော့ ဘတ်တယ် ထင်တယ် stats မှာ ပြတယ် ဒါမှမဟုတ် ဖွင့်ကြည့်ပြီး မဘတ်တာလဲဖြစ်နိုင်တယ်
ကြာပါတယ် မပြန်တော့ဘူး ပို့ပေးလိုက်မယ် တရုတ်စာသင်တန်း သွားတက်ပြီးသာဘတ်ပေတော့
တရုတ်စာဆိုလို့ ခုထိ သွေ့ပချိ တောင် ဌာန်ကရိုဏ်းကျအောင် ပြောတတ်သေးဘူး။
အရမ်းကြိုက်သွားပြီ ခုမှတွေ့ပြီး ၁ကနေ ပြန်ဖတ်တာ
NangNyi April 30, 2012 at 3:16 PM
အားလုံးပြီးမှ အီးဘွတ်ခ်ပို့ပေးမှာ စောင့်နေတာ ဖြစ်သည်.. တမြင် မဖတ်ဘဲ ကျော်ထားခြင်းလည်း ဖြစ်သေးသည်..